Paakistaan: Marii dhimma dubartootaarratti qophaa'ee garuu dubartoota hin hirmaachisne - BBC News Afaan Oromoo
Paakistaan: Marii dhimma dubartootaarratti qophaa'ee garuu dubartoota hin hirmaachisne
Kaawunsiliin Artii Paakistaan mirga dubartootaa irrattii marii dhiroota qofaan gaggeeffamu qopheessu isaa erga dhagahameen booda, hawaasa dheekkamsiisnaan geddaramuuf dirqameera.
Sagantaa Jimaata har'aa gaggeeffamu kanarrati erga mormiin karaa midiyaalee hawaasummaatiin ka'een booda hirmaattoonni dubartootaa akka dabalamaniifi maqaan marii kanaas akka geeddaramu taasifameera.
Matadureen marii kanaaf qophaa'ee, 'Feminizimii: Ilaalcha isa bira' kan jedhu ture. Amma garuu gara 'Feminizimii (sochii mirga dubartootaa) Hubachuu' kan jedhutti geeddarameera.
Qopheessitoonni marii kanaa qaamooleen dhirooti warri murtee murteessan 'feminizimii' irratti ilaalcha isaanii waliif qoduuf ture jedhu, qeeqxonni hedduu garuu yaaduma marii kanaa irratti gaaffi kaasaniiru.
Paakistaan biyya oolantummaan dhiiraa itti mullatu keessaatti, rakkoo wal qixxummaa korniyaa furuuf biyyattiin waltajjii marii feminizimii dhiroota qofaa qopheessuudhaan haala jiruu furuuf filannoo kan ta'u mitis jedhu qeeqxoonni.
Jalqaba hirmaattota yaa'ichaa keessa maqaan dubartii tokko qofa kan ture yoo ta'u, isheenuu dhumarratti maqaanshee kan kaa'ame.
Dhekkamsa hawaasaatiin booda dubartoonni haasaa akka taasisaniif affeeraman - rogeeetti mirga dubartootaa Mehtab Akbar Rashdi fi gaazexxeessitu Quwatrina Huseen fa'i keessatti argamu.
Haa ta'u malee ammas geddaramsi kun nama hunda hin amansiisne.
Gaazexessituu beekamtuu aduu guyyaa ajjeefamte
Magaalota akkamiin dubartootaaf mijatoo taasisu?
Namootni hedduu dhiirota marii kanarratti hirmaachuuf murteessaniin, feminizimii ykn mariii mirga dubartootaa fedhii ofiisaanii ittiin guddifachuufi himannaa jedhuun qeeqaniiru.
Namichi Erum Hayder jedhamu tokkos, "Dhiirooti mirga dubartootaaf akka falma ani beeku maarii kanaratti hirmaachuuf ni qaana'u," jechuun Tiwiitarii gubbaatti barreeseera.
Marii kana kan gaggeessitu Uzmaan "Kaayyoon keenya dhirooti midiyaalee gurguddoo keessatti aboo murtee murteessu qabaniifi hordooftota hedduu qaban waa'ee feminiziimii irratti hubannoo isaani akka dubbataniif ture," jechuun BBC Urdu'tti himteetti.
Marii kanaratti hirmaata kan ta'e, rogeessi mirga namooma Jibran Nasir matadureen inni jalqabaa kan ergaa biraa kennu akka itti fakkaatu hima.
"Kan anatti himame mariin kun dhirootni waliin ta'anii dhimmaa oolantummaa dhirootaafi feminizimiin dhirootaaf maaliif akka barbaachisu irratti mar'iatu kan jedhudha. Feminizimii ibsuu ykn amma rakkoo dubartootaa akka dhiraatti haasa'uuf miti," jechuun bareesseera.
Gaafii maarii kanaratti ifatti maaltu haasa'amaa jedhuufi dubartoonni maarii kanaratti akka hin hirmaanne beekta turtee jechuun BBC irraa dhiyaateef Jibraan deebii kennu hin feene.
"Kun rakkoo guddaa miti," jedha. "Namootni mormii qabani kaasani, sana boodammoo hoggantoonni wantoota geeddaraniiru. Ani marii kanarratti keessummaa qofa."
Gaazexeessituu beekamtuu aduu guyyaa ajjeefamteef haqni gaafatame
Egdoota dhiiraa Saawudii: Jijjiramni kun dubartootaaf maal jechuudha?